I-Black Crowes yalawula isigxina
Unyaka wedwala ngo-1990 wawudalwe kakhulu kwiminyaka emashumi eminyaka. Iingoma ezithandwa kakhulu kwizikhululo zamatye eziqhelekileyo kunye neentengiso zentengiso zadalwa ngabaculi bezilwanyana ezinjenge-Eric Clapton kunye neZZ Top. Kodwa kwakungumhlambi wabatsha abasuka kumzantsi owenene.
Damn Yankees - "Ukuza Kwexesha"
Iqela le-rock-pop elihlanganisa uTommy Shaw weStyx , uJack Blades of Night Ranger , isiXeko seMoto uMadman Ted Nugent noLynyrd Skynyrd sikaMichael Cartellone senziwe ixesha elide. Kwaye nawuphi umxholo wesondlo ongcono ukufikelela kwixesha elikhulu kwixesha elithi " Amantombazana, Amantombazana, Amantombazana " kunokuba intombi ihlwayayo i-oats yayo yasendle? Lawa maDamn Yankees asebenze ukususela ngowe-1996, emva koko waba yinto ephindaphindiweyo kwakhona, ngaphandle kwengubo kwakhona. Kaninzi "
ZZ Phezulu - "Intloko yam e-Mississippi"
Abagadi bamaGitare uBilly Gibbons kunye neDusty Hill bebehamba ngeempahla zabo zamatye ukususela ngo-1969. Ngaphezulu kweminyaka engaphezu kwe-20 beza kuba ngumgcini we-American sound red blood sound, baqhubeka beqhawula. "Intloko yam e-Mississippi" yenze isayinini ye-chug-chug-chug ekhwaza ngendoda. Kaninzi "
INXS - "Ukuzibulala"
Isihloko sinokuba nesiqalo saloo mihla, njengomntu ongaphambili uMichael Hutchence wathatha ubomi bakhe ngo-1997. Kodwa ibali leendumiso emva kwenani le-rock-dance-dance liye lenziwa yintombi yakhe, uKylie Minogue, edayayo inwele zakhe indima yefilimu. Omnye unako ukuva impembelelo yale ngoma kwi-museky e-funky ethi "I-Panic Station".
Ukongezwa okufanelekileyo kwi- Back to Future Future soundtrack , ngenxa yeengoma ezihambayo, "i-Doubleback" ibonisa ngaphezulu kokulila kwegitare ebeka iZZ ephezulu kwimephu. I-comeo kuMichael J. Fox yaseWest West ifaka njenge-squad yase-Hilldale ehlala kwindawo yokuhlala yomeleza isikhalazo esithintelayo. Ezi zindebe ziqiniseke ngokufanelekileyo. Kaninzi "
Inkampani Engalungile - "Ukuba Ufuna umntu"
Thetha nge-ballad yamandla. Emva kweminyaka yokuguqulwa komgca kunye nobunzima bokuhlala bendima, iNkampani ibhalise uBrian Howe njengomlandi. Umtshini wamatshini olandelayo, kunye neNkampani embi iphinda yenza u-boss uhamba nabalandeli bomculo. Kaninzi "
I-Aerosmith - "Into Eyenzayo"
Omnye wabambiswano be-Aerosmith kunye neengoma ezibhaliweyo zeDesmond Child, le ngqungquthela yelula iqela laseBoston kwimida yabo yomsana. Uhambo lukaSteven Tyler oluvela kwi-banshee ekhwaza ukusabalalisa lwalukhuni, lubonisa ukuba yena kunye nabafazi bakhe babe ne "Yintoni Eyenzayo" ukugcina ilifa elide leminyaka. Kaninzi "
U-Eric Clapton - "Uthando Olubi"
Ungavumeli ukuba isingeniso se-gauzy se-synth-bipe sitshatile- "Uthando olubi" luyiClasspton . Waye "lusizi ngenxa yabantu bodwa," ngoko yena kunye nabadlali bakhe abagciniweyo be-backup bazinikezela umdaniso womlilo wengoma. Ilifa legitare eliye lakhwela i-jams ukususela kuma-60s , "Slowhand" yenza kakuhle kwisithembiso sakhe sokuqhubeka nokugubungela kakuhle kwi-millennium elandelayo. Kaninzi "
Iibhola eziMnyama - "Kunzima Ukuphatha"
Ngamanye amaxesha, ukuzithumela kumculo womculo ngokugubungela i-tune classic kungasemva. (Ngaba kukho umntu okhumbula enye into eyenziwa nguNicki French, ngaphandle kwengubo ye-1995 ye-" Total Eclipse of Heart "?) Kodwa ama -Black Crowes adibanisa eso siqalekiso xa benza ingqungquthela yabo ye- Otis Redding "Yokubamba Kanzima." Umculi uChris URobinson watshata umphefumlo kunye neendlela zengxondorha.
AC / DC - "i-Moneytalks"
Ama-rockers Aussie AC / DC abeka imali yabo emilonyeni yabo-umculo wabo wawungatholakali ngokusemthethweni kwi-intanethi kude kube ngo-2012. Mhlawumbi ngo-1990 umsakazo we-megahit (wabo osisigxina esicatshulwa kakhulu e-United States) wabona kwangaphambili ukuhlaziywa komculo njengomkhiqizo, ngaphezu kobugcisa. Okanye mhlawumbi hayi-i-pumper-pumper ihambisane neentengiso kwi-movie ye- Moneyball ka-2011. Kaninzi "
Amacangca amnyama - "Ndiphinde ndikhwele"
Izitshixo ezifudumeleyo, izandi ezivuthayo, ukuchithwa kwe-blues ne-acoustic rock ... i-recipe ye-Black Crowes 'yasekuqaleni yayingumqhubi. Iqela laseGeorgia elibizwa nge-albhamu yokuqala ye- Shake Shake Money Maker , kunye nomculi uChris Robinson ngokuqinisekileyo wakwenza. I-swagger yakhe yayingumngqangi kangangokuba ekugqibeleni wafika uPenny Lane ngokwakhe, uKay Hudson, njengomkakhe.
Izikhundla zeetragi zihloniphekile iTunecaster.com
9 Ukuhlanganiswa koLwabiwo oLungileyo kufuneka Ube nalo
I-10 ye-Rockest Singers 'ye-90s
8 Iingoma zeeNgoma eziye zagubha 'i-90s
Icandelo eliMnyama leSicelo.IimfunoMessages kwi-Delphi Izicelo
I-Braking Regenerative Work?
Isinqumo seBhayibhile esenza amanyathelo
Iilwimi eziqhelekileyo ezidibanisiweyo ziza Kuza Kuza Kuza
Inkcazo ye-Amphoteric kunye nemizekelo